Oké ọkụ gbawara n’Ugwu Kilimanjaro
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » Oké ọkụ gbawara n’Ugwu Kilimanjaro
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ejiji • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Oké ọkụ na-apụ na Ugwu Kilimanjaro
Ọkụ malitere na mkpọda ugwu Kilimanjaro n'ehihie Sọnde, na-eme ka ụjọ na ụjọ na-atụ ndị mmadụ bi n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Ugwu ahụ, ugwu kachasị elu n'Africa.
Ruo ụtụtụ Mọnde, ọkụ ahụ nọ na-aga n'oké ọhịa ya, ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ sitere n'ụlọ ọrụ na-echekwa anụ ọhịa na ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na-arụ ọrụ iji gbochie ya.
Onye na-ahụ maka mgbasa ozi na-akpọ Tanzania National Parks (TANAPA) Maazị Pascal Shelutete kwuru na amabeghị ihe kpatara ọkụ ọgbụgba a dịka ndị ọchịchị na-agba mbọ ịkwụsị ya.
Ọkụ a bidoro n’ebe ezumike maka ndị njem nleta a kpọrọ Whona, Shelutete kwuru n’ozi ezigara ya Twitter.
O kwuru na ozi na TANAPA bụ onye na-elekọta ugwu a ga-enye nkọwa ndị ọzọ gbasara ntiwapụ ahụ.
Mgbapu oku n’Ugwu Kilimanjaro belatara nke ukwuu n’afọ ndị gara aga site na itinye aka na nchekwa nke usoro okike n’elu ugwu, ma gafee Tanzania na Kenya.
Ugwu Kilimanjaro ntiwapụ ọkụ nwere ike ibute mmetụta ọjọọ nke kachasị na gburugburu ebe obibi.
Enweghi mmiri na mmiri ozuzo nye ndi mmadu bi na elu ugwu na okpomoku di elu na agbaze snow na ugwu ugwu bu ihe egwu kachasi anya site na oku oku, ndi isi ochichi na Kilimanjaro Region ebe ugwu di na ala.
Ugwu a na-eto site na ala ubi na ndagwurugwu di ala na oke ohia na ala alpine na elu.
Gburugburu ugwu Kilimanjaro na-akwado ndụ nye ihe karịrị nde abụọ (2 nde) ndị bi na mgbada ya na Tanzania na Kenya ndị dabere na akụnụba ugwu, ọkachasị mmiri na mmiri ozuzo maka ọrụ ugbo na ịzụ anụ ụlọ.
N'ịbụ nke dị na 330 kilomita site na Equator, Ugwu Kilimanjaro snow na-adọta na-adọta n'etiti ndị njem 55, 00 ruo 60,000 kwa afọ, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị ugwu na ndị njem nleta na-ahụ n'anya.
Ugwu a bu ebe kachasi njem nleta na Tanzania na Serengeti National Park, Ngorongoro Crater na ogige ndi ozo nke ozo.
Kilimanjaro bụ otu n’ime ugwu na-enweghị oke ugwu na ụwa nwere onwe ya na ugwu atọ mejupụtara ya bụ Kibo, Mawenzi na Shira. Ugwu ugwu nile karịrị kilomita 4,000.
N'ịbụ nke e kere site na 750,000 afọ site na mgbawa ugwu, ugwu Kilimanjaro were ọtụtụ mgbanwe mgbanwe ala maka afọ 250,000, na atụmatụ ndị a dị ugbu a n'ime afọ 500,000 gara aga mgbe ọtụtụ ọgba aghara na ịma jijiji gasịrị, data ndekọ ala.